लकडाउनमा बालबालिकामा पर्ने नकारात्मक असर बारेमा बन्यो चलचित्र, के छ सन्देश | RatoTara.com Websoft University
पूर्वाञ्चल खबर भिडियो मुख्य समाचार स्वास्थ्य
लकडाउनमा बालबालिकामा पर्ने नकारात्मक असर बारेमा बन्यो चलचित्र, के छ सन्देश
काठमाडौं । रातो तारा ट कम, देश बिगत पाँच महिनादेखि लकडाउन र निशेधाज्ञाले बन्धक बनि रहेको बेला आम मानिसमा यसले नराम्रो प्रभाव पारेको छ । अझ त्यसमा पनि बालबालिकाहरु सबैभन्दा बढी यसको मारमा छन् । दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मात्र होईन मध्यम वर्गीय नागरिकहरु पनि यतिबेला निम्न वर्गमा झर्न थालिसकेका छन् । यो बेलामा सरकारले मास्क र सेनिटाईजर अनिवार्य भनि रहेको छ तर नागरिकलाई भोको पेट भर्नुछ । मास्क र सेनिटाईजर होईन नागरिकलाई काम र माम चाहिएको छ । आम नागरिकको वर्तमान अवस्था यस्तो छ, यो अवस्थाले बालबालिकाको भविष्यलाई कस्तो पर्वाह पार्ला ? अझ बेवारिसे बालबालिका भए के गर्लान ?
Labels: पूर्वाञ्चल खबर भिडियो मुख्य समाचार स्वास्थ्य